Faa'iidooyinka Kahortaga Kahortaga Naxariista iyo Aqbalaada • Dawooyinka Inc.eu
Waxtarrada ka-hortagga daroogada ee ka timid naxariis iyo aqbalid
By mr. Kaj Hollemans, KH Talo Sharci (@KHLA2014)
1 Dib ucelinta
2 Hoos u dhigista waxyeellada
3 Yoga nuivers
4 Calaamadaha daroogada
ka bilaabista ee siyaasadda daroogada Nederlandku had iyo jeer:
Ka hortagga ayaa ka fiican daaweynta
Daaweyntu waa ka fiican tahay dhimista waxyeellada
Yaraynta waxyeelladu waa ka fiican tahay wax aan waxba qaban
Dhaqan ahaan, siyaasadda daroogada Nederland waxay xoogga saareysaa ka hortagga isticmaalka daroogada iyo xaddidaadda halista isticmaalka daroogada; adeegsiga naftiisa, deegaanka ugu dhow iyo bulshada. Dhawaan, si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa inay jirtay isbeddel. CDA iyo CU ayaa mas'uul ka ah markay tahay siyaasadda daroogada taasna waxay leedahay cawaaqibyada lagama maarmaanka ah, hadday tahay hadal iyo siyaasad labadaba.
Bishii Luulyo 1 Wasiirka Garsoorka iyo Amniga Grapperhaus ayaa jawaabaha soo socda siiyay jawaabaha su'aalaha baarlamaanka D66 iyo PvdA on warbixinta in cadaadis oo kali ah kuma filna in wax ka qabashada daroogada:
“Majiraan hal dhinac oo cadaadis cadaadis ah oo kusaabsan siyaasada daroogada Nederland. Feejignaanta sidoo kale waxaa la siiyaa ka hortagga iyo niyad-jabka isticmaalka daroogada. Siyaasadda ka-hortagga waxay si xoog leh ugu heellan tahay ka-hortagga isticmaalka iyo caadi ka ahaanshaha kooxaha qaarkood. Xoghayaha Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga ayaa ka codsaday Machadka Trimbos, oo ay weheliyaan dhinacyada kale, inay horumariyaan hanaan cusub oo looga hortagayo dhalinyarada inay bilaabaan isticmaalka daroogada iyo la dagaalanka caadiyeynta. Waxaan sii wadi doonaa inaan su'aal ka saarno sida caadiga ah ee isticmaalka maandooriyaha ee kooxaha qaarkood oo aan u sii wadno dadaalkeenna si aan ugu gaarno kooxaha bartilmaameedka ah farriinta saxda ah. ”
Marka la eego, siyaasadda daroogada ee 2019 waxay diiradda saaraysaa cadaadiska iyo ka-hortagga, iyada oo ka hortagga horay loo arkayay in lagu kordhinayo cadaadiska. Ka hortagga waxaa loola jeedaa oo keliya in looga hortago iyo isticmaalka isticmaalka. Si taxadar leh ayaa loo siinayaa kan kale, ugu yaraan sida muhimka ah, ka hortagga, taas oo ah hoos u dhigista waxyeellada, halkaas oo xoogga la saarayo xadaynta dhaawaca caafimaadka ee ay sababtay isticmaalka daroogada.
Hoos u dhigista waxyeellada
Yareynta waxyeellada ayaa diiradda saareysa xaddididda dhaawaca caafimaadka ee ay sababtay isticmaalka daroogooyinka aqbalida isticmaalka waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan. Eeg tusaale ahaan dhawaan ku dhawaaqida wax ka qabashada isticmaalka daroogada ee xafladaha. Waa waxyaabo caafimaadka u xun oo bulshada dhib ku ah. Markaad iibsato waxaad ku maalgelinaysaa dambiga, ”ayuu yiri wasiirka. Wuxuu doonayaa isticmaalka bulshada daroogada su'aalo waydiinayaan oo ka hortagaya inay adagtahay. Qaadashada kaniiniyada badan ee ciidaha waxay keeneysaa calaamad qaldan, waa inay istaagtaa. Waa inaad ku dhiirantaa inaad cambaareyso isticmaalka daroogada ee yoga soorooyinka. ”
Ereyga "yoga nuzzles" waxaa markii ugu horreysay la adeegsaday 2018. Sida laga soo xigtay Van Dale macnaheedu waa: "Qof inta badan ku nool nolol caafimaad qabta oo miyir qaba, laakiin mararka qaarkood ku dhaca mukhaadaraadka xafladda iyo kookaha, tusaale ahaan nolosha habeenkii." Xaqiiqda ah in Caddaaladdu si sax ah u isticmaasho qaabkan waxay siinaysaa cunto fikirka. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa hawl-kar, muwaadiniin qaan-gaar ah oo si buuxda uga qayb qaata bulshada oo ka walaacsan cimilada, joogtaynta, masuuliyadda, xorriyadda iyo aqoonsiga. Dadkani waxay si miyir-qab ah u doortaan inay daroogo isticmaalaan waqti ka waqti si ay uga baxsadaan culeyska maalinlaha ah una dhigaan aragti.
Si kastaba ha noqotee, wasiirku (isagoo wakiil ka ah hay'adda) wuxuu dirayaa baaq cad oo ah inuusan u dulqaadanayn doorashadan. Qofka noocaas ah qeyb ayuu ka yahay dhibaatada, maxaa yeelay dembiga ayuu ku sii adkeynayaa isagoo iibsanaya daroogo. Ma jirto meel loogu naxariisto hadalladaas. "Markaa ma ahayn inaad daroogo isticmaasho" ayaa lagu maahmaahaa. Farriinta uu sida tooska ah ugu dirayo ayaa ah in qof daroogo soo qaatay oo dhibaato ka dhalato arrintaas darteed uusan ku tashan caawimaad. Tani waa horumar aan loo baahnayn, oo macnaheedu noqon karo in dadku aysan mar dambe ku dhiirran karin inay raadsadaan caawimaad haddii ay la kulmaan dhibaatooyin ka dhasha isticmaalka daroogada.
Haddii aysan dawladdu aqbalin isticmaalka mukhaadaraadka, waxaa jira dareen aan ku filnayn in la dhimo khatarta. Xaddididda dhaawaca caafimaadka ee ay sababtay isticmaalka maandoriyaha ma leh mudnaanta koowaad oo keeneysa xaalado halis ah oo halis ah.
Ka hor inta uusan fasax xagaaga ah, wasiirku wuxuu warqad u dirayaa Golaha oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha ku saabsan mukhadaraadka loo yaqaan 'synthetic drugs', oo ay ku jiraan siyaasadaha hirgelinta xafladaha iyo dhacdooyinka, iyo horumarinta sharci dejinta.
Mid ka mid ah waxyaabaha ka mid ah siyaasadda cusub ee kiis kasta ayaa noqon doona habka xoojinta ee farsamooyinka daroogada; kiimikooyinka loo isticmaalo soo saarida daawooyinka. Qalabka kiimikooyinka badankood loo isticmaalo sida daawada daroogada ayaa sidoo kale leh isticmaalka sharciga ah ee muhiimka ah (sida qalabka wax lagu duubo, daawooyinka iyo qurxinta, qurxinta, nadiifinta ama walwalka).
Xarunta Koowaad waxay ku jirtay 2010 weli waxay aaminsanyihiin in aan horey loo mamnuucin daawooyinka daroogada, maxaa yeelay waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin badan oo sharci ah. Aad bay muhiim u tahay in la helo isku dheelitir wanaagsan oo u dhexeeya ka hortagga isticmaalka sharcidarrada ah iyo in aan lagu joojin isticmaalka sharciga (tusaale ahaan, isticmaalka ganacsiga ee warshadaha kiimikada).
Laakiin habka adag ee ugudbinta maandooriyaha maaha oo kaliya saameyn xun ku yeelan kara ganacsiga. Waxa kale oo ay keeni kartaa isticmaalka walxo halis badan oo halis ah ee soo saaridda XTC iyo daawooyinka kale ee synthetic, taas oo halis weyn u ah caafimaadka dadka isticmaala iyo bulshada. Waxaan fahamsanahay in dadku rabaan inay wax ka qabtaan wax soo saarka daroogada, laakiin haddii aad khatar galinayso isticmaalaha iyo deegaanka, waxaan la yaabanahay qofka ugu dambeyntii ka faa'iideysan doona. Ma noqon karto in dadku dhawaan dhici doonaan, sababtoo ah haddii ay lagama maarmaan tahay, siyaasiyiintu waa inay mamnuucaan kiimikooyin aan khatar aheyn oo loo isticmaalo wax soo saarka daroogada. Kadibna waxaad dhibaatada ka dhigeysaa mid sii weyn. Waxaa intaa dheer, inaad sidoo kale u dhaqanto si liddi ku ah mabaadiida siyaasadda caafimaadka ee Nederlandka.
Coronavirus wuxuu dardargelin karaa sharciyeeynta xashiishadda gudaha Mareykanka
Maaddaama dhaawaca dhaqaale ee ka dhashay masiibada uu isa soo tarayo, magaalooyinka iyo gobollada Mareykanka waxay ...
Hay'ada Caafimaadka Kanada waxay ka joojisay ruqsadihii shirkada soo saare xashiishka ee Evergreen
Shirkadda Canadian (British Columbia) ee fadhigeedu yahay Kanada (British Columbia) shatiga shatiga ee Evergreen Medicinal Supply Inc.
Zaanstad waxay ka baxday tijaabada haramaha
Xaqiiqda ah in dowladda Nederland aysan run ahaantii horumar ka sameynin tijaabada xashiishka waxaa muujiyay dhammaan diidmada ...